Cuntooyinka Yareeya Isku Buuqa (Stress) - Daryeel Magazine
Qofka oo xaaladiisu nafsad ahaan amma cawaasiiftiisu kacsan tahay oo isku buuq (Stress) la soo darso, haddii uu cuno cuntooyinka fudud fudud waxa kor u kaca hormoono iyo dux badan oo jidhkiisa ku kaydsan, kuwaasoo ku keena in xaaladiisu ka sii darto sida lagu sheegay cilmi-baadhiso caafimaad oo tiro badan oo Maankaab soo xigtay.
Haddaba, marka uu qofku xaaladahan degenaansho la’aanta ah ku jiro waxa laga yaaba in hurdadu ka tago oo uu tahli kari waayo inuu seexdo maskaxda oo aan degenayn aawadeed, waxaana uu qofku u baahan yahay cuntooyin naftiisa dejiya si uu hurdo fiican u heli, kuwaasoo ay ka mid yihiin:
Isku buuqa daba dheeraaday amma degenaanshaha raga waxa uu dhaawac u geysta hab-dhiska dfiaaca cudurrada qofka (Immunity System), taasina waa sababta qofka aan maskax ahaan degenayn xannuun kasta si fudud ugu qaado. Khudrada toontu waxa ay ka kooban tahay maadooyin difaac u ah bakteeriyada amma walxaha qalaad ee jidhka dibada ka soo weerara (Bacteria, fungal and Virus), waxaanay caawiyaan haddii la cuno hab-dhiska difaaca jidhka oo keena in isku buuqo hoos u dhaco.
Sidoo kale, toontu waxa ay daawo u tahay amma yaraysaa garaaca iyo xannuunka la soo darsa nudaha (tissue) iyo kala goysyada jidhka oo xannuunkooda uu sabab u noqdo walaahawga (Stress). Waxa kale oo aad u fiican in la isku darsato doonta, qajida, tamaandhada iyo basashada oo lagu lagu daray liin dhanaan amma saliida la yidhaa oliifa (Olive oil), kadibna la isku shiilay, laguna darsaday saladh amma hilib aan badnayn sida khubarada caafimaadku iftiimisay, kadibna qofka waxa u fududaanaysa in xaaladiisa nafsad ahaaneed degto.
Kaabashka iyo dhirta kale ee soo raacda:
Kaabashka amma kaabajka waxa lagu yaqaan inuu ka kooban yahay nafaqo aad u badan, waxaana jira dhir badan oo la mid ah oo saladhku ka mid yahay. Waxa ay khudaartan ka kooban yihiin macdanta Sulphur, kuwaasoo noqda maadada la yidhaa Glucoinolates oo beeerka ka caawisa inuu soo daayo maadooyin la dagaalama isku-buuqa hormoonada keena.
Cunista kaabashka amma khudaarta la midka ah waxa ay dejiyaan xaalada qofka haddii uu dareemaayo degenaansho la’aan, waxaana lagu cuni kara iyadoo la kariyey iyo qaydhinkaba.
Marka uu qofku ku sugan yahay xaalad walaahaw ah (Under stresss) jidhkiisa iyo maskaxdiisaba waxa ay si aad ah u quutaan faytamiino aad u badan, sidaa darteed lawsku waa il muhiim ah oo nafaqo laga helo. Faytamiinka B iyo macdanaha Siink (Zink), Magneesiyam (Magnesium) iyo saliida Omega oils la yidhaa waxyaabaha laga helo oo lawsku u badan yahay waxa ay faa’iido u leeyihin qofka isku-buuq badan dareemaaya inuu quuto.
Sidoo kale, lawsku waxa uu isku dheeli tira sonkorta dhiigga raacda amma ku jirta, isagoo hoos u dhiga haddii sonkortu ku badato dhiigga, waxa uu fura amateedka, isla markaana taageera hab-dhiska kiimikaad ee burburinta amma gubista cuntada (Metabolism), laakiin waxa ku badan duxda, taasna in qofku iska xakameeyo ayaa u fiican. Cilmi-baadhiso badan oo la sameeyey waxa ay iftiimiyeen dadka cuntadooda ku darsada lawska in ay yihiin kuwo xannuuno badan ka badbaada.
kalluunka oo ka kooban maadada la yidhaahdo Omega 3, waxa ku sii jira maadooyin la yidhaa DHA iyo EPA. Maadada DHA la yidhaa waxa ay faa’iido u leedahay hurdada, qofkuna waxa uu ka helaya inuu si deg deg ah u seexdo. Maadada EPA sidoo kale waxa ay la dagaalanta in isku-buuqo amma walaahawgu sababo xannuun unugyada jidhka ku yimaada. kalluunku waxa kale oo ku jira macdano iyo faytamiino badan oo ay ka mid yihiin Faytamiin B, Zink iyo Magnesium, sidaa aawadeed waxa ay faa’iido u leedahay duxda kalluunku in qofku xaalad ahaan noqdo mid degen inta badan haddii uu joogteeyo cunista kalluunka.
Cuntooyinka kale ee ladagaalama isku buuqa waxaa ka mid ah midhaha avocado da, shukulaatada madow, shaaha iyo cinabka.
Malabka Iyo Qorfaha Oo La Isku Daraa Waa Dawo Dabiici Ah Oo Lagula Tacaali Karo Xanuuno Badan Maxaa Imaan Kara Haddii Kaadida La Isku Celiyo Mudo Dheer? Waxyaabaha Keena Warwarka & Walaaca (Stress) Cuntooyinka Beerka Sifeeya